टेबलौ के हो? Tableau सर्वोत्तम वर्चुअलाइजेशन सफ्टवेयर हो
Tableau बजारमा गति किन
ठूलो डेटा हो
Tableau कुनै डाटा छैन
शॉकिंग, इंटरैक्टिव भिजुअल
बहु प्लेटफार्ममा समान समानता
Tableau एक उद्योग नेता हो
2 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टेबुल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू र प्रमाणपत्र जसले डेटा भिजुअलकरणमा मद्दत गर्दछ
ट्याब्लेट डेस्कटप मूलभूत लक्ष्य लक्ष्य श्रोता
2। Tableau डेस्कटप उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम र प्रमाणीकरण
Tableau डेस्कटप उन्नत लक्ष्य श्रोता
Tableau डेस्कटपको लागि Preqisite उन्नत
Tableau सफ्टवेयर डाटाबेस टेबलau सफ्टवेयर द्वारा उल्लेख गरिएको छ। ट्याब्लेऊ सम्बद्धहरूले लगभग कुनै पनि डेटा स्रोतमा सहज रूपमा, यो कम्पनी डाटा वेयरहाउस, माइक्रोसफ्ट एक्सेल वा इलेक्ट्रोनिक डेटा पाउनुहोस्। टेबलउउले डेटा परिवर्तन गरी आउटपुट रूपमा संलग्न, सहज धारणालाई ड्यासबोर्ड भनिन्छ। यस प्रक्रियाले महिना वा वर्षहरूको विरोधको रूपमा मात्र सेकेन्ड वा मिनेट लिन सक्छ, र सहज इन्टरफेस प्रयोग गर्न सरल प्रयोग गरेर पूरा गरेको छ। टेबलाउ किन?
Tableau को लागी संचरण गर्न को लागी एक संधारा, डेटा को पछि लाग्न को लागी संभालने र जांच को लागी थियो। यो धेरै कम सुधार समय मा यो परिणाम, तपाईंको डेटा उल्लेखनीय गतिशील बनाउन। बजारमा समायोजन गर्ने क्षमता एकदम ठूलो ऊपरी हात हो। ट्याब्लेऊले तपाइँलाई छिटो व्यापार छनोटहरू व्यवस्थित गर्न तपाईंको डेटामा आधारित छ, तपाईंलाई अनुकूल स्थिति प्रदान गर्दछ।
डाटा परीक्षालाई गाह्रो हुनु पर्दैन, तर धेरै डेटा धारणा चरणहरूले यो तरिका बनाउँछ। Tableau बेपरहित असुविधाहरु संग dispens, जो तपाईंको डेटा मा सबै भन्दा ज्यादा खोज को महत्व मा जोर राखयो। टेबलाउको सिधा सरल सरल इन्टरफेस केही सिक्न गाह्रो छ तर यो अर्थ छ कि तपाईले काम गर्न डेटा virtuoso हुनु हुँदैन।
ठूलो डाटा अनुसन्धान क्षमताहरूको लागि असफल भयो, ट्याबलेटले डाटाको अनावश्यक उपायहरू सजिलो बनाउदछ सजिलो। ट्याब्लेऊ तपाइँको डाटाको कितना विस्तृत छ भनेर विस्तृत जानकारी सफ्टवेयरमा उपलब्ध गराउन तपाइँको डाटा भन्दा उच्च डेटा विच्छेद र कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै डाटा Tableau मा बराबर छ। इन्टरफेस प्रयोग गर्न सजिलो एक अत्यन्त छिटो डाटा मोटर द्वारा सुधिएको छ जुन विभिन्न स्रोतहरूबाट प्रक्रिया डेटा असामान्य प्रवृतिसँग छ। तपाईले अब सम्म जोड्नु आवश्यक छ कि कुन डेटा धारणा सफ्टवेयर तपाइँको डेटाको प्रयोगमा प्रयोग गर्न को लागी, किनकि टेबलाउले यो सबै कुरा गर्दछ।
शायद सबै भन्दा अचम्मको प्राथमिकतात्मक दृष्टिकोण तालिका तालिकामा अधिक दावेदारहरू अद्भुत डेटा प्रतिनिधित्वहरू सिर्जना गर्ने क्षमता हो। पास, टेबलाउ कुनै डेटा धारणा सफ्टवेयर को सबै भन्दा बढि अझै सम्म उपयोगी डेटा प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ।
Tableau ले कुनै पनि व्यक्तिलाई तुरुन्तै खुला खुला गरेर व्यापार अनुसन्धान उद्योग परिवर्तन गरेको छ - चाहे डेस्कटप उपकरण, वेब कार्यक्रम, आईप्याड वा सेल फोन मार्फत।
टेबलाउले व्यापार ज्ञान उद्योगको माध्यमबाट असामान्य सम्मान जितेको छ र चाँडै गुणस्तर डेटा धारणाको लागि मानकमा बदलिएको छ।
टेबलौले गार्टनरको व्यवसायिक अंतर्दृष्टि उद्योग विशेषज्ञमाथि पनि जितेको छ भने निर्णयको द्वि चरणको रूपमा।
Tableau डेस्कटप मौलिक
Tableau डेस्कटप उन्नत
1। Tableau डेस्कटप मूलभूत प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम र प्रमाणीकरण
यस प्रारम्भिक कक्षामा केन्द्रित डेस्कटप क्षमताहरू सिक्नुहोस्। तपाईं डेटा जाँच र तालिका योजनामा ​​दृश्य योजनामा ​​सावधान साप्ताहिक चयन गर्नुहुनेछ, र कसरी पत्ता लगाउने र बुद्धिमान ड्यासबोर्डहरू कसरी पत्ता लगाउने।
यो कोर्सले सडक स्तर Tableau क्लाइन्टको बीचमा सिक्नको लागि उद्देश्य छ। यो कुनै पनि व्यक्तिगत व्यक्तिको लागि हो जुन डेटा संग काम गर्दछ - विशेष वा प्रणालीगत नींवमा ध्यान दिईरहेको छ। यस कोर्सले टेबलाउमा महत्वपूर्ण विचारहरू र प्रक्रियाहरू बुझ्न र प्रयोग गर्न मद्दत पुर्याउनका लागि सजिलो जटिल प्रस्तुतीकरणमा जानुहोस् र बुद्धिमान डैशबोर्डमा कसरी सम्वन्धित गर्ने भनेर थाहा पाउदछ।
यस कोर्स को अन्त मा, तपाईंलाई यसको क्षमता हुनेछ:
तपाईंको डेटासँग सम्बद्ध गर्नुहोस्।
एक डेटा स्रोत बदल्नुहोस् र छोड्नुहोस्।
टेबलौ शब्दहरू मिलाउनुहोस्।
टेबलाउ इन्फेसेसन / विश्वव्यापी उपयोग को उपयोग गर्न को लागी प्रभावी रूप देखि प्रभावशाली बनाउन को लागी।
मौलिक संख्या जग्गा अनुमानहरू, अनुकूलन संकलन र अनुपात, मिति गणित, र शान्त तालिका संकलन सहित आवश्यक figurings बनाउनुहोस्।
साथ साथ प्रतिनिधित्व को प्रकार को उपयोग गरेर आफ्नो डेटा मा कुरा गर्नुहोस:
पाई आउटलाइन र पट्टी ग्राफहरू
डबल हब र समेकित ग्राफहरू विभिन्न जाँच प्रकारका साथ
तालिकाहरू हाइलाइट गर्नुहोस्
धारणा साझेदारी गर्न निर्माण ड्यासबोर्ड।
टेबुल डेस्कटपको थप विशेष तत्वहरूको अन्वेषण गर्नुहोस् र तपाईंको डेटामा थप गर्नुहोस्। तपाईं figurings र ग्राफिक्स प्रक्रियाहरु को लागि प्रयोगात्मक प्रयोग र आविष्कारिक परीक्षा र डैशबोर्ड बनाउन सिक्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं एक propelled Tableau ग्राहक बनाउन प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्न चाहनुहुन्छ? यस कोर्समा तपाई कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ कि टेबलाउ डेस्कटपको भन्दा बढि बाहिर लगाउँदा figurings मा लगेर र साँचो परिस्थितिहरूमा लागु गरेर। यसले तपाईलाई बुझ्न मद्दत गर्नेछ जब तालिका गणना, लगाउने वा एलओडी प्रयोग गर्नुपर्छ र जब तिनीहरूले लुगा लगाउँछन्। तपाईं कसरी सुर्खेत तयार हुन र आफ्नो प्रस्तुतिहरूको व्यवस्था गर्ने बारे बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो समय, भौगोलिक, र समीक्षा डेटा तोड्ने वरिपरि विशेष परिस्थितिहरु मार्फत गरिनेछ। यस कोर्सको अन्त्यमा तपाईंले कल्पनात्मक अनुसन्धान र ड्याशबोर्ड बनाउनको लागी तपाईलाई बढ्दो इमारत रणनीति र कम्प्युटेशनलाई अझ राम्रो बनाउनेछ।
यो एक प्रबल स्तरको स्तर हो। यस कक्षामा जानु अघि टेबलाउमा समझदारी हुनुको कम्प्युटेशनको बलियो समझ हुनुपर्छ। यो अत्यधिक व्याख्या गरिएको छ कि डिस्प्लेहरूले डेस्कटप तेस्रोमा जान अघि डेस्कटप आई र डेस्कटप द्वितीय वा समान विचारहरू र क्षमताहरू पाएको छ।
यस कोर्स को अन्त मा, तपाईंलाई यसमा क्षमता हुनेछ:
प्रसोधित प्रतीकांक लागू गर्नुहोस् तपाईंको ज्ञानमा थप ज्ञान बढाउन
फ्यूज प्रवर्द्धन रूपरेखा तपाईंको अनुसन्धानमा बदल्दछ
प्रगतिशील ड्याशबोर्डिङ विधिहरू लागू गर्नुहोस्
Figurings, प्यारामिटरहरू, र तालिका अनुमानहरूको जोडी प्रयोग गर्नुहोस्
नियमित व्यवसाय प्रयोग गर्ने मामलाहरूलाई सम्बोधन गर्न तालिकाउ विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस्
धेरै चरम प्रभावको लागि आफ्नो धारणाहरू र ड्यासबोर्डहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्
साँचो व्यापार अवस्था दृष्टान्तहरूको अन्वेषण गर्नुहोस्